नागरिक लगानी कोषले मंगलवारदेखि ८२.८४ % हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्ने
पुस २७, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले पुस २८ गतेदेखि ८२ दशमलव ८४ प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री खुला गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव ८२८४ को अनुपातमा रू. १ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख ५९ हजार २०० बराबरको १ करोड ३५ लाख ९२ हजार ५९२ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो । यो हकप्रद प्रयोजनका लागि कम्पनीले पुस १४ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको छ । बुक क्लोजको आधारमा पुस १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र यो हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले यो हकप्रद शेयर विक्री गर्न पुस २ गते नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले गत भदौ २२ गते बोर्डमा हकप्रद निष्कासनका लागि निवेदन दिएको थियो ।
कम्पनीको हकप्रद विक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विरगञ्ज, जनकपुर, चितवन, काभ्रे, बाँके, सुर्खेत, कैलाली, मकवानपुर, झापाको शाखा कार्यालय र नागरिक लगानीकोषको काठमाडौं, विराटनगर र पोखराको कार्यायबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
साथै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यो हकप्रद माघ १९ गतेसम्म विक्रीमा रहनेछ । कोषको हकप्रद शेयरलाई इक्रा नेपालले समयमै वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने इक्रा एनपी आइआर ए प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
कोषले गत असार २० गते सम्पन्न २५ औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत सो हकप्रदको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
उक्त सभा मार्फत २२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको कोषको बोनस पश्चात चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ६४ करोड ७ लाख पुगेको छ । सोहि पूँजीको आधारमा कोषले हकप्रद विक्री गर्न लागेको हो ।
पुस मसान्तसम्म पाँच ओटा विकास बैंकले सम्पन्न गरे वार्षिक साधारण सभा [२०७७ माघ, २]
अब सरकारी सेवा लाइनबाट होइन अनलाइनबाट : मन्त्री गुरुङ[२०७७ माघ, २]
नेपाल हस्तकला महासंघको ४०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न[२०७७ माघ, २]
कोभिसिल्ड नामक कोरोना भ्याक्सिनलाई नेपालमा आपतकालिन प्रयोग गर्न अनुमति[२०७७ माघ, २]
आइ.सि. एफ.सि फाइनान्समा दुई जना सञ्चालक चयन[२०७७ माघ, २]
नेपाल बैंकमा तीन जना सञ्चालक निर्वाचित [२०७७ माघ, २]
कुमारी बैंकको कम्पनी सचिवमा ढुंगाना नियुक्त[२०७७ माघ, २]